ရိုး ရိုး ဘ လော့ဂ် : (44) ကျမ ရဲ့experience of 15 Seconds death
16/6အင်္ဂါနေ့ညနေ ကတည်းက နေမကောင်းလို့ အခန်းထဲ အောင်းနေမိတယ်။ အစားအသောက် ပျက်လာတယ်။ မီးဖို ချောင်ကိုသွားပြီး အစားလုပ်ရမှာ ခေါင်းမူးသလို ရင်တုန်သလို ဖြစ်နေတာနဲ့ 
အခန်းထဲမှာ ရှိတဲ့အစားအသောက်နဲ့ဆေးတွေကို မျိုချ စောင်ချုံ mobile phone ထဲက radio ဖွင့် 
စာပို့ သမားလာတဲ့ အချိန်လောက် ခဏသာ အခန်းအပြင်ကိုထွက်ပြီး အခန်းထဲမှာ အခြောက်အခြမ်း အစားအသောက် တွေနဲ့ စား ရေသောက်၊ဆေးသောက်၊ တနေကုန်အိပ် လုပ်နေခဲတာ သောကြာည သန်းကောင်ကျော် ၁နာရီမှာ flat mate အမဲမလေး Junior က တံခါးကြားကနေ စာရွက်ထိုးလာလို့ဘာလဲလို့သူကိုမေးဖို့ တံခါးဖွင့်ပြီး အထမှ ခြေလှန်းတွေ မမှန်တော့ဘူး။ ဒူးတွေက ခွေလာတယ်။ သူက အသံမကြားတာ ကြာလို့ စိုးရိမ်တယ်တဲ့အိပ်နေရင်လဲ မနိုးအောင် စာရေးပြီး ပို့တာတဲ့ ။
Junior ကိုစကားပြန်ပြောနေတုန်း မျက်လုံးတွေပြာလာတယ်။ ခဏလေး ငါအသက်ရှူဖို့ပတင်းပေါက်ဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုပြီး အသွား။ ပတင်းပေါက်လက်ကိုင် ကို လှည့်တွန်းအပြီး ဘိုင်းကနဲ ခေါင်းနဲ့လဲကျတယ်။ အသိစိတ် လွတ်သွားတဲ့10 sec, 15 sec အချိန်အပြီးမှာ ခေါင်းတွေအတော်ရှင်းပြီး ငုတ်နေတဲ့ချွေးတွေထွက် လာတော့တယ်။
သူလဲလန့် သွားပြီး အနားလာတယ်။ သူဘာပြောနေတာ ကျမမသိဘူး။ 1၀ seconds လောက်ကြာမယ်ထင်တယ်။ မျက်နှာကို စာရွက်နဲ့ လာယပ်ခတ်ပြီး စိုးရိမ်စိတ်နဲ့ ဆူတယ် ကျမမှာ စကားပြန်မပြောနိုင်အောင် ကြောင်အအ ဖြစ်နေမိတယ်။ လဲကျတာလုံးဝမနာဘူး။
အသိတွေရဲ ဖုန်းနံပါတ်ကို တောင်းတယ်။ ကျမ အတွက် ဗိုက်ကြီးတကားကားနဲ့ မီးဖိုချောင်ထဲမှာ ခေါက်ဆွဲခြောက်ထုတ် ပြုတ်ပြီး J2O orange drink ယူလာတယ်။ ကျမကို ဒါးကျိန်းကျိန်းပြီး ကျွေးပါတော့တယ်။ မစားရင် 999 နဲ့ambulance ခေါ်ပြီး ကျမဖုန်းထဲက နံပါတ် အကုန်လုံးကို ဆက်မယ်တဲ့။ အားနာပြီး နည်းနည်း ယူစားလိုက်တယ်။ စောစောတုန်းက ရုတ်တရက် အသိလွတ် သွားတာကို ပြန်တွေပြီး ကျမ ကြောက်လာတယ်။
မီးဇာမကုန် ဆီမခန်း ခင်၊ မိသားစုအတွက် ဘာမှ မလုပ်ပေးနိုင်ခင်၊ မသေချင်သေးဘူး။ ကျိုင်းတောင်းမှာ ဖျားတုန်းကလို အိမ်ရောက်မှ သေပါရစေ ဘုရား လို့ ။
မြန်မာပြည်မဟုတ်တဲ့ နေရာမှာ ဆို
ကြေးစည်ထုပြီး လိုက်ပို့ ပေးပါ့မလား?
နောက်ဆုံးခရီးကို လိုက်ပို့ နှုတ်ဆက် နိုင်ကြမှာလား?
သင်္ချိုင်းက ဇီးခက်ကလေးကောက်ပြီး
ကိုယ်စားယူလာ တရားနာဖို့ ဖိတ်ပေးနိုင်ပါ့မလား?
ချစ်သူခင်သူတို့ ပြုပေးတဲ့ ကိုယ်စားအလှူအမျှ ပေးသံ
မြန်မာပြည် မှာဘဲ သေချင်တယ်။
Posted by ရိုးရိုး at Sunday, June 21, 2009